Nabad sugidda Itoobiya way Nagu Dhexjirtay Intii ka Dambeysay 1999 – Rasaasa News
May 15, 2009 Jwxo-shiil
Ma haboona in runta laga qariyo ummada, waxaana iga go,an in aan sheego waxa aan ka ogahay, in kasta oo ay hada u ektahay in dadkii xidhiidhka la lahaa Nabadsugida Itobiya ay hada ka baxayaan saaxada siyaasadeed ee ururka Jwxo.
Cadawga shacabka Somalidda Ogaadeeniya intii ka dambaysay 1999 wuxuu ku dhex milmay Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeeniya. Kolkii hore waxaan haysanay oo kaliya waxa afka qalaad lagu yidhaahdo “circumstantial evidentce”, balse hadda waxaan haynaa cadeemo aan la dafiri karin.
safarkii ugu horeeyay ee uu JWXO-shiil Nairobi ku gaaray wuxuu ka soo ka xaystay nin loogu magac daray “Xamza”. Waxaa na loogu soo waramay, in dadkii xog ogaalka ahaa loogu sheekeeyay in uu ku fiican yahay samaynta Aaladda Qaraxda ee saacadda wadato, meel fogna laga hogaamin karo. Waxaan dadka xog ogaalka loo sheegay in uu Xamza la shaqayn jiray Jabhaddii Al Itixaad.
Sidda ay Xamza iyo JWXO-Shiil isku barteen lama oga, balse waxaa la og yahay in ay markii ugu horeysay ay isku barteen magaaladda Nairobi, caasimadda dalka Kenya.
Xogo kale oo aan isla xiligaa uu Xamza saaxadda JWXO soo galay, aanu meelo kala duwan ka helay waxay noo sheegayeen in jabhadda Itixaad Xamza laga eryay markii la ogaaday in uu si hoose ola shaqeeyo Nabadsugidda Gumaysiga Itoobiya. Xamza waxaa fariisin looga sameeyay magaaladda Hargaysa, JWXO-shiilna aad ayuu halkaa ugu dhaqaalayn jiray. Xamza wuxuu ahaa qof aan baahidiisa la dabooli karin, oo codsigiisa aad u badan yahay.
Muddo ka dib, waxaan maqalnay in Xamza iyo Abdi Abdullahi ay gacanta cadawga galeen, oo xabsi Harar ku yaal lagu hayo. Muddo yar markay ka soo wareegatay, waxaa la arkay iyaga oo ciidanka JWXO hor taagan. Markii la weydiyay sidda ay xabsiga uga soo baxeen, waxay labaduba isugu marakhaati fureen in ay ka soo baxsadeen Xabsiga. sidda ay uga soo baxsadeena, waxaa lagu tilmaami karaa “Mucjiso ama miracle” oo aan wax macquul ahayn ama maan gal ah toona maaha. Iyaga oo laba meelood oo badhtamaha xabsiga ku kala xidhan, oo ciidanka Gumaysigu dhan walba ka jiro, ayaa Askartii iyaga waardiyaynaysay banaadiiqda intay meel isaga tiiriyeen ayay hurdeen. Labo Askari oo waardiyo ah, oo laba meel oo aan isku dhaween kala jooga, hal mar qoryaha geed isaga tiiriyay, hurdo dheerna galay. Arimahan oo kale waxay ku dhacaan oo kaliay sheeko cirfiid “fairy-tale”,sheeko khayaali.
Caadiyan, waxay ahayd in nimankan la soo dhaweeyo, balse aan lagu aminin xil Hogaan,ama waxay ahayd in laga fogeeyo guddiga fulinta. Taa ma dhacday?. Jawabta waa maya. In kasta oo JWXO-shiil marar badan looga digay arimaha nimankan, haddana kuma uusan camal falin, bil caksi, iyagii ayuu xilal muhiim ah u dhiibay.
Muddo yar ka dib, wuxuu xamza u wareegay Burco, xoolo meel uu ka keenay aan la ogayn ayaa wuxuu magaaladda Burco kaga furtay Dukano, wuxuuna samaystay Shirkad Tagaasi (Taxi-yadda). Muddo sanad iyo badh ah markii uu hawshaa ku jiray ayaa Jaliyadii soo ogaatay, cidda uu Xamza gacan saar la lee yahay. Arintaa markay qaraxday, ayuu xili habeennimo ah Xamza si toos ah ugu noqday Harar, wuxuuna cadeystay in uu la shaqeeyo Sirdoonka Gumaysiga Itoobiya.
Abdi Abdullahi, Sulub Abdi Ahmed JWXO – Shiil in ay ku xidhan yihiin nabadsugidda Gumaysiga Itoobiya waa markhaati ma doonto, isaga oo faahfaahsanna waxaad ka akhrisan doontaan qaybta 2aad iyo middka 3aad hadduu Eebaha qaadirka idmo.